ကောလဟာလ‌တှကေို ဖွရှေငျးလာပွီဖွဈတဲ့ နတေိုး – Cele Lover
ကောလဟာလ‌တှကေို ဖွရှေငျးလာပွီဖွဈတဲ့ နတေိုး
ကောလဟာလ‌တှကေို ဖွရှေငျးလာပွီဖွဈတဲ့ အကယျဒမီမငျးသားခြော နတေိုး
အကယျဒမီမငျးသားခြော နတေိုးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှကေို အခိုငျအမာယူထားနိုငျသူပဲဖွဈပါတယျနျော. နတေိုးက ကွျောငွာမှာရော ရုပျရှငျဇာတျလမျးကားတှမှောလညျး သရုပျဆောငျပိုငျနိုငျလှနျးတာကွောငျ့ လူကွီးရော လူငယျပါအသညျးစှဲခဈြနရေ
တဲ့ မငျးသားတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။မငျးသားခြော နတေိုးကတော့ အနအေထိုငျသိုသိပျသူပီပီ ခဈြသူရှိနတောကို သိပမေဲ့ လကျထပျဖို့အတှကျ ရညျရှယျပွီလားဆိုတာကိုလညျး ပရိသတျကိုအသိမပေးဘဲ နထေိုငျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ အရာရာကို သိုသိပျပွီးနေ
တတျသူပီပီ နိုငျံငံရေးနဲ့ပကျသကျလာရငျလညျး တိတျဆိတျလှနျးနတောကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျခွငျးကို ခံနရေသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ မငျးသားခြော နတေိုးက ဝဖေနျမှုတှရှေိခဲ့ရငျလညျး ဖွရှေငျးခကျြပေးလမေ့ရှိဘဲ သူလြောကျလှမျးနတေဲ့ လမျးကိုသာဂရုစို
ကျပွီး နထေိုငျသူဖွဈပါတယျ။အခုတဈခါမှာဆိုရငျသရုပျဆောငျနတေိုးကမင်ျဂလာဆောငျလိုကျပွီဆိုတဲ့သတငျးနှငျ့ ပတျသတျပွီးအခုလိုပွနျလညျရှငျးပွထားပါတယျနျော။သရုပျဆောငျနတေိုးကမှားနပေါတယျမမှနျပါဘူးဆိုပွီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျထကျမှာရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊ စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကောလဟာလ‌တွေကို ဖြေရှင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားချော နေတိုး
အကယ်ဒမီမင်းသားချော နေတိုးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို အခိုင်အမာယူထားနိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်. နေတိုးက ကြော်ငြာမှာရော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကားတွေမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်လွန်းတာကြောင့် လူကြီးရော လူငယ်ပါအသည်းစွဲချစ်နေရ
တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားချော နေတိုးကတော့ အနေအထိုင်သိုသိပ်သူပီပီ ချစ်သူရှိနေတာကို သိပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီလားဆိုတာကိုလည်း ပရိသတ်ကိုအသိမပေးဘဲ နေထိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို သိုသိပ်ပြီးနေ
တတ်သူပီပီ နိုင်ံငံရေးနဲ့ပက်သက်လာရင်လည်း တိတ်ဆိတ်လွန်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းကို ခံနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားချော နေတိုးက ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ရင်လည်း ဖြေရှင်းချက်ပေးလေ့မရှိဘဲ သူလျောက်လှမ်းနေတဲ့ လမ်းကိုသာဂရုစို
က်ပြီး နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်နေတိုးကမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီးအခုလိုပြန်လည်ရှင်းပြထားပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်နေတိုးကမှား​နေပါတယ်မမှန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous Article တရားသူကွီး၏ ဆှစေဉျမြိုးဆကျ (၇)ဆကျလုံး အလုံးစုံပကျြစီးခွငျးဖွဈပါစလေို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ခမျြးခမျြး…
Next Article မွနျမာ့ပွဿနာ ဖွရှေငျရေးး ပွညျပ ဝငျမစှကျဖို့ ရုရှားသမ်မတ ပွောကွား